“အပြစ်”ဖြစ်မိသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “အပြစ်”ဖြစ်မိသည်
Posted by aye.kk on Jan 29, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
တနုံ့နုံ့နှင့်ခံစား၇မဆုံးရှိချေသည်။ ဆေးကြော၍လည်းမရနိုင် ပါပေ၊ထိုအကြောင်းလေးအားစဉ်းစားမိတိုင်း ခံစားနေ၇သဖြစ်ဖွင့်ဟချင်မိကာ စာဖတ်သူတို့အား ဖော်ပြေ၇းသား၇ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျမမှတ်မိနေသည့်အရွယ်ကဟုဆိုချင်ပါသည်။ ကျမ၏မိဘများတို့တွင် အိမ်ခြံလုံအောင်မွေးထားသော ခွေးထီးတကောင်နှင့်ခွေးမလေးတကောင်ရှိပါသည်…..။ ခွေးထီးတကောင်ကတစ်ကိုယ်လုံးခဲပြာေ၇ာင် ဖြစ်၍မိသားစုတို့အားလုံးက ချစ်စနိုးနှင့်ပြာကြီးဟုခေါ်ကြပြီး အမလေးကိုတော့တစ်ကိုယ်လုံးအုန်းခွံေ၇ာင်ဖြစ်၍ညိုမ
ဟုခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ပြာကြီးကအိမ်နောက်ဖေးခြံဝင်းထဲတွင်နေထိုင်ကာ၊ညိုမကအိမ်ကမိသားစုများနှင့် အတူပွတ်သီးပွတ်သပ်နေထိုင်ပါသည်။ကျမက
ခင်တွယ်တတ်သူဖြစ်၍ ညိုမအားလွန်စွာချစ်ပါသည်…….။ ကျမသည်မိဘများကကျမအားစား၇န်ပေးထားသည့်စားစ၇ာများအားညိုမကိုချကျွေးတတ်သူဖြစ်ပါသည်…….။ မိဘတို့ကသိလျှင်ဟန့်တားတတ်သော်လည်း၊ကျမ
အကျင့်ကမပျောက်ပါ……။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်…..ညိုမကလူစကားအား လွန်စွာနားလည်သည့်အပြင် ကျမပြောသမျှနားလည်နေသည်ကို အလွန်သဘောကျ နှစ်ခြိုက်နေမိခြင်းကလည်းအကြောင်း၇င်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့်ကျမဘာစားစားညိုမအား ကျွေးနေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ှ ပြာကြီးနှင့်ညိုမတို့နှစ်ဦးအား အမေတို့မအား၍ကျမအားထမင်းကျွေးခိုင်းလျှင် ကျမလွန်စွာသဘောကျပါသည် ၊ တစ်အိမ်သားလုံး အမဲသားမစားကြသော်လည်း ခွေးကျွေး၇န်အတွက်ဆိုလျှင် အဖေကအမေ့အားဈေးမှအမဲ၇ိုးများမှာကာ နေ့စဉ်အမြဲဝယ်ကျွေးပါသည်။ အဖေကခွေးဆိုသည်မှာ အမဲ၇ိုးအားလွန်စွာကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း ၎င်းတို့အတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်ကြောင်း အဖေပြောသည်ကိုမကြာခဏ ကြားဘူးနေပါသည်။ အမေတို့ကခွေးနှစ်ကောင် အတွက်ဟုဆိုကာ
ကျမအားကျွေးခိုင်းသောနေ့များဆိုလျှင် ကျမစားမည့်ဟင်းလျှာပုံတာအား တောင်းထားတတ်ပါသည်။ ပြီးလျှင်ညိုမစားမည့်ပန်းကန်ထဲသို့ ထဲ့ကျွေးတတ်ပါသည်၊ထိုသို့်မကြာခဏပြုလုပ်သည်ကို ပြာကြီးကတွေ့ မြင်လျှင်ညိုမအားအမြဲလိုလိုမာန်ဖီကာ မာန်စောင်နေတတ်ပါသည် ။ ကျမကပြာကြီးအား..
“ဟင်း”နော်ဟုဆိုကာ ခြောက်တတ်ပါသည်။ ပြာကြီးကအမဲ၇ိုးကလွဲလျှင်ဘာမျှမစား၊အသားငါးများကျွေးပါကလည်းဘယ်တော့မှမကြိုက်၊အမဲ၇ိုးမဟုတ် သောနေ့ဆိုလျှင်ပြာကြီးထမင်းမစားတော့၊တစ်ခါတစ်ခါခြံထဲမှာခွေခွေလေးသွားလှဲနေတတ်ပါသည်။ အဖေမြင်လျှင်တော့ အမေ့ကိုအမဲ၇ိုးမပါ၇ကောင်းလားဟုဆူတတ်ပါသည် ။ ထိုအခါအမေက… (ဥပုတ်သ်)နေ့လိုမျိုးတိုက်ဆိုင်နေလျှင် တစ်ခါတလေမေ၇ာင်းတတ်၊ ၀ယ်မရ၍သာပြန်လာ၇သည် စိတ်ထဲမှာမကောင်းပါဟုအဖေ့အား အမေကရှင်းပြတတ်ပါသည်။
တစ်ခါတွင်ပြာကြီးအကြောင်းအားသိချင်သဖြင့်အမေ့အား ကျမမေးဘူးပါသည်။အမေပြောပြသည်မှာ….. ပြာကြီးကား……….အင်မတန်ဂျီးထူသည် ၊ သူ့သခင်များက အိန္ဒိယပြည်ပြန်သွားကြ၇သဖြင့် ခေါ်သွားခွင့်မပြု၍သာ မြန်မာပြည်မှာကျန်နေရစ်သည်။ သခင်ကိုလွမ်းနာကျ၍နေမကောင်းဖြစ်ကာ
ဆေးကုထားပေး၇သည်။ သခင်များကလည်း ကောင်းကောင်းလေးပြုစုစောင့်ရှောက် မွေးထားပေး၇န်မျက်ရည်စက်လက်နှင့် မှာကြားကာထားခဲ့၇ရှာသည် ။ ငါတို့အပေါ်မှာလည်း သူ့ သခင်များကသစ္စာရှိခဲ့ကြသူများဖြစ်ပေသည်။ယ္ခင်ကငါတို့နှင့်အတူတူနေထိုင်ကြသည့် အိမ်ခြံစောင့်ဒ၇၀မ်(မာလီ)ကုလားလင်မယား ဖြစ်သော်လည်း မိသားစုပမာချစ်ခင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့လင်မယားနှစ်ဦးလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖွားများ ဖြစ်၍အချိန်တန်တော့သူတို့နိုင်ငံပြန်ကြ၇သည်။ သူတို့ပင်မဟုတ် ထားခဲ့၇သောခွေးကလည်း လွန်စွာသစ္စာစောင့်သိသည်။ သူခိုးပင်အနားမကပ်၇ဲ လွန်စွာပင်စိတ်ချ၇သည်ဟု ပြောပါသည်။
အဖေကအဖော်၇၇န်ညိုမလေးအား မွေးထားသော်လည်းသူကမောင်နှမလိုပဲနေနေသည်။ အဖေက…ငါကသူ့အကျင့်ဗီဇကောင်းသဖြင့်မျိုးဖောက်ချင်၍ ညိုမအားမွေးထားသည်၊မိတ်လိုက်ချိန်ေ၇ာက်လာလျှင် ဘယ်ခွေးကမှမနေနိုင်၊မိတ်လိုက်ကြသည်ချည်းပင်၊အခုပြာကြီးကညိုမမှမဟုတ်အခြား ဘယ်သူနှင့်မျှပင်မိတ်လိုက်ခြင်းမရှိ။လွန်စွာအံ့သြဘို့
ငါတို့ကခွေးလောက်တောင်သစ္စာမ၇ှိဟုပြော၇မလိုဖြစ်နေသည် ဟု….၊ သဘောအလွန်ကျကာပြောဘူးလေသည်။
သူမစားတော့၊ကျမကမကျွေးမိ… ပြီးတော့ပြာကြီးကခြံထဲမှာပဲနေသည်။ ဘယ်သူနှင့်မျှလည်းေ၇ာေ၇ာနှောနှောမနေတော့၊ကျမကမခင်တွယ်မိခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကျမကခေါင်းငြိမ့်ပြလျှင်သူ့ပါးစပ်လေးဖြင့် ကိုက်ချီကာယူလာပေးပါသည်။ ကျမကအိမ်နောက်ဖေးစီး ခုံဖိနပ်လေးမေ့ကာ အမေဆူမည်မည်ကိုစိုးသဖြင့် အိမ်ထဲစီးဖိနပ်လေးဖြင့်လာမိလျှင်….
ညိုမရေခုံဖိနပ်လေးယူပေးပါဦးပြောလျှင် ကဆုန်ပေါက်ပြေးသွားကာ ခုံဖိနပ်လေးအားတဖက်စီသာကိုက်ချီကာယူလာပြီး.. နှစ်ခေါက်နှစ်ခါမျှပင်အမောခံ၍သူယူပေးပါသည်။
အိမ်ထဲစီးဖိနပ်နှင့်အိမ်နောက်ဖေးဖိနပ်မှားစီးလျှင်.. စည်းကမ်းမရှိဟုဆိုကာအမေကမြည်တွန်တောက်တီးတတ်၍ ဆူတတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ညိုမကအ၇မ်းလိမ္မာသည်၊သူမကိုကျမအလွန်ချစ်ကာ
ပြာကြီး၏ကျေးဇူးကိုကျမကသတိမမူတတ်ခဲ့၊တန်ဘိုးထား၇မည်ကိုကိုယ်ချင်းမစာတတ်မိခဲ့၊ပြဿနာစမိသူက ကျမဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ပြာကြီးကညိုမကိုကျမကအချစ်ပိုနေသည် ဟုထင်ကာသူ့၇င်ထဲလိပ်ခဲတည်းတည်း၇ှိနေခဲ့ပါသည်။ ကျမကအစာကျွေး၇သည့်တစ်၇က်တွင် ညိုမအားခါတိုင်းကဲ့သို့အသားငါးထဲ့ပေးမိ၇ာတွင်..ပြာကြီးက.. ထမင်းပန်းကန်ပြားမှစားနေ၇င်း..ညိုမအားမာန်ဖီခြင်းမရှိတော့ဘဲကျမအားတချက်စောင်းငဲ့ကာကြည့်ပြီး.. တချက်မျှမာန်ဖီလိုက်ပါသည်။ ကျမကအံ့အားသင့်သွားကာချက်ချင်း သူ့အားဆူမိပါသည်။ နင်မစားတဲ့ဟာငါကညိုမကျွေးတာ…နင်ဘာမနာလိုဖြစ်
နေတာလည်းဟုပြောလိုက်မိပါသည်။ မာန်ဖီခံလိုက်၇သဖြင့်ကြောက်လည်း ကြောက်မိသွားပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင်ကျမကညိုမကို
ကျမအားအခဲမကြေအငြိုးထားကာ အချိန်အခါကောင်းကိုစောင့်နေခဲ့ပါတော့သည်။ ကျမအားပြာကြီးအင်မတန်မုန်းသွားသည်ကို
မသိသူကားကျမပင်ဖြစ်ပါသည်။ နွေ၇ာသီကျောင်းပိတ်ရက်တနေ့မှာဖြစ်သည်၊ကျမတို့အိမ်ခြံနောက်ဖေးအိမ်မှာဇီးသီးပင်ရှိပါသည်။ အိမ်နောက်ဖေးခြံတံခါးသော့ဖွင့်ထားသဖြင့် ဇီးသီးကောက်ရန်သွားမိပါသည်။
အိမ်နောက်ဖေးအိမ်ကခွေးထီးတကောင်ရှိပါသည်။ (ဂုတ်ကြားဟုခေါ်ပါသည်) ကျမတို့ကထညက်အမြဲကျွေးသဖြင့်ကျမတို့နှင့်
အယာလှမ်းကာလိုက်လာပါသည်။ ကျမသတိထားမိလိုက်သောအချိန်၌ကား…. ပြာကြီးကသိကာချက်ခြင်းပင် ဂုတ်ကြားအားအဖော်ခေါ်ကာ… ပြေးလိုက်ပြီးလျှင်ကျမအားကိုက်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။ ပြာကြီးနှင့်ဂုတ်ကြားတို့က၇ုတ်တ၇က်ပြုမူခြင်းဖြစ်၍ ကျမ.. မထင်မှတ်ကာအံ့သြပြီးငယ်သံပါအောင်အော်မိပါတော့သည်။ အငြိုးကြီးသောပြာကြီးကား..ကျမအားသူကိုယ်တိုင်မကိုက် ပဲဂုတ်ကြားနှင့်ကိုက်ခိုင်းခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမျှဆွဲချိန်၊တားချိန်မ၇လိုက်….ပဲ လူကြီးတွေလည်းအံ့အားသင့်ကာဝေခွဲမရဖြစ်ကုန်ကြပါသည်။ ခွေးနှစ်ကောင်ကကျမအား ဤသို့ပြုမူလိုက်ခြင်းကိုလွန်စွာမထင်မှတ်ထား၍ဖြစ်ပါသည်။ ၇ာဇ၀င်မှာစာတင်၇လောက်အောင်ဟုသာပြောချင်ပါတော့သည်။ မိမိအိမ်မှခွေးကပြေးလိုက်ဆွဲကာ.. သူများအိမ်ကခွေးနှင့်ကိုက်ခိုင်းသည့်အဖြစ်ကလွန်စွာရုပ်ဆိုးလွန်းလှ၍ဖြစ်ပါသည်။
အကိုက်ခံ၇ကာအလန့်လွန်နေသောကျမအားလူကြီးများက ချက်ခြင်းပင်ေ၇တခွက်တိုက်ကာ ဒဏ်ရာအချေအနေအားကြည့်ကြပါသည်။
သောကြောင့် ကျမငိုခြင်းကားမဆုံးနိုင်တော့။အပေါက်ရာကသုံးပေါက်မျှပင်ဖြစ်သည်။ အဖေနှင့်အမေကကျမအားအိမ်ပြန်ခေါ်လာကာ ဒဏ်၇ာအနာအား အရက်ပျံနှင့်ဆေးကြောပေးကာ သင်္ချာ(ဆေးနီ၇ည်)အားထဲ့ပေးပါသည်။
စပ်သဖြင့်ကျမမှာဖျတ်ဖျတ်လူးပင်…၊အဖေကပြာကြီးအား သတ်မည်ကိုကြိမ်းသေသိနေမိပါသည်။ ကျမကဘယ်နည်းနှင့်မျှပြာကြီးအားခွင့်မလွတ်
နိုင်တွေ့ ရာသင်္ချိုင်းဓားမဆိုင်းဟုဖြစ်မိပါသည်။ ပြာကြီးကားတပတ်မျှတိတိအိမ်ပြန်မလာ၊အဖေနှင့်
အဖေကခွေးကိုက်ပါက ချက်မှာခွေးရှူးမပြန်နိုင်အောင် ခွေးရှူးပျံဆေး(၁၄)ချက်မျှထိုးရမည်၊ငါ့သ္မီးကားငယ်လွန်းသဖြင့် ဆေးထိုးခံ၇မည်ကိုစဉ်းစားမိပါက ငါ့၇င်မှာမခံစားနိုင်အောင်ဖြစ်၇သည်ဟုအမေ့အားပြောပြလျှင် အမေကအမွေထိမ်းအိမ်သို့ပြေးကာဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြပါသည်။ ထိုအခါအမေ့၏အမွေထိမ်းအုပ်ထိန်းသည့်သူက သူတော်စင်ဖြစ်နေ၍ ကျမအားညနေခေါ်လာပါ ဒဏ်၇ာကုသပေးမည် ကလေးဘာမျှမဖြစ်စေ၇ဟု ပြောပါသည်။အမေသည်အဖေ့အား အကျိုးကြောင်းပြောပြကာ ညနေေ၇ာက်လျှင်အမ်းကုန်းဆီခေါ်သွားပါသည်၊ ပြီးလျှင်အမ်းကုန်းသည် အင်းစာရွက်ဟုထင်၇ပါသည် ထိုအင်းစာရွက်လေးအားပြာချပြီးကာမန်းထားသည
့်ေ၇အားတိုက်ပါသည် ။ သုံး၇က်အတွင်းအနာဖေးကွာကြကာ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားမည်ဟုအမေ့အားပြောပြပါသည်။
ပြီးလျှင်အတီပြောစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ ကလကာအစိမ်းေ၇ာင်နောက်သို့ခေါ်သွားပြီး ကျမအားအပြင်မှာနေ၇န်အမေကပြောပါသည်။ ကျမကစပ်စုသည့်ဝါသနာ ၇ှိကာအမ်းကုန်းနှင့်အမေတို့ပြောသည့်
စကားအားခိုးနားထောင်မိပါသည် ။ ကျမနားစွန်နားဖျားကြားလိုက်၇ခြင်းက အတီ…ကလေးခွေးကိုက်ခံ၇သဖြင့်ကံနိမ့်သွားသည်၊စိတ်မကောင်းမဖြစ်နှင့်တ၇ားနဲ့သာဖြေပါဟု ပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အမေကစိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ပါသည်၊အဖေက အန်းကုန်းဆေးကုသမှုအား သုံး၇က်အတွင်းစောင့်ကြည့်ကာ လက်တွေ့ ပျောက်ကင်းသွားသဖြင့် ယုံကြည်ကာဆေးမထိုးတော့ပါ..။
အန်းကုန်းကိုယုံကြည်သည်၊ အဖေ့၇င်ထဲမှာတော့စိုး၇ိမ်ကြောက်ကြစိတ်ကတထိတ်ထိတ်နှင့် ဟုအဖေကပြောပြပါသည်။ တပတ်ပြည့်တော့ပြာကြီးကပြန်လာပါသည်… စိတ်ပြေလောက်ဟုသူထင်နေမိ၍ဖြစ်ပါမည်။ အဖေကနေ၇ာအနှံ့၇ှာတာတောင်သူ့ အားမတွေ့ သဖြင့်တအိမ်သားလုံးကအံ့သြနေကြပါသည်။ အမေကပြာကြီးအားမသတ်၇န်တောင်းပန်ပါသည်၊ကျမကနှိပ်စက်ချင်နေမိပါသည် ၊ ကိုယ်ကိုတိုင်ကတော့သတ္တိမရှိပါ ပြာကြီးအားစိတ်နာနေမိပါသည်။ အဖေနှင့်အစ်ကိုအမများကပြာကြီးအားခွင့်မလွတ်နိုင်ဟုဆိုကာ အဖေကသတ်မည်ဟုပြောလျှင်အမေက
အဖေက အမေမသိအောင်ပြာကြီးကြိုက်သောအမဲ၇ိုးအား အသားအများဆုံးတွဲနေသည့်ဘက်မှရွေးယူကာ အင်တလင်း(အဆိတ်ဆေး)သုတ်လိမ်းကာ သူများနှင့်သတ်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။ သူလည်းကိုယ်တိုင်မကိုက်ခဲ့၊ငါလည်းသူ့အားလက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်သတ်၇န်ကံအကြောင်းမပါ…. ဟုအဖေပြောပါသည်၊မောင်နှမအားလုံးအား
ပြာကြီးကားဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်အိမ်ေ၇ှ့သို့ မေ၇ာက်ေ၇ာက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပြီးကာ အိမ်ရှေ့ အေ၇ာက်ဘိုင်းကနဲလဲကြပြီးမှ သေသွားပါသည်။ ထိုအခါမှအဖေက အသိတ၇ားဝင်ကာ ငါသတ်ခိုင်းခဲ့တာမှားပြီဟုဆိုပါသည်။ ခွေးပေမဲ့သစ္စာရှိလွန်းလှသည်။နင်နဲ့ငါက
ကံအကြောင်းတရားတို့ကုန်ပေပြီ၊နောင်သံသ၇ာမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံတွေ့ စေ၇န်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည် ဟုပြောကာ အလုပ်သမားတယောက်အားခေါ်ယူ၍ ရေချောင်းထဲမျှောချပစ်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။အမေ့ကိုကား
ညိုမလေးသေသည့်အချိန်တွင်ကား……. ကျမတို့အိမ်ရှေ့ ဗန်ဒါပင်ချေရင်းအောက်တွင်
ကောင်းကောင်းမြုပ်နှံခဲ့ပေးကြပါသည်။ တစ်အိမ်သားလုံးဆုမွန်တောင်းပေးကြကာ မသေမီကျမတို့မောင်နှမအားလုံးက
သူ့ ကိုကောင်းကောင်းမကျွေးတိုင်း ခွေးကျင့်ခွေးကြံကြံပြီး ခွေးခွေးချင်း ပင်းပြီး အညှိုးထား ကိုက်ခိုင်းတာ
အဲလိုခွေး ဘာမှ မသနားနေနဲ့ ..
ခွေးနဲ့ ပြိုင်ပြီး ရန်ဖြစ်နေတာပါကလား..
အဲဒါတွေကြောင့်မို့ ခွေးမမွေးချင်တာ အန်တီအေးရေ
သံယောဇဉ် ငြိသွားရင် ၊ စိတ်မော ရတာကလား
အိမ်မှာလည်း ခွေးမွေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့အပေါ်မှာ သစ္စာရှိပြီး လိမ္မာတဲ့ ခွေးတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေသေရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလွန်းလို့ ဒီတကောင်နောက်ဆုံးပဲလို့ တအိမ်လုံးဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။ ဒီလိုမျိုးကတော့ အခုမှကြားဖူးတယ်။ ငယ်မွေးခြံပေါက်မဟုတ်လို့ထင်ပါတယ်။
အစ်မ အေးရေ – ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
ခွေးတွေက သခင်ကို ချစ်ကြတာဘဲ ကြားဘူးခဲ့တာ။ ဒီလို အငြိုးထားတာ မျိုး မကြားဘူးခဲ့ဘူး။
ဒါကြောင့် ကိုယ်မသိတာတွေ လောက မှာ အများကြီးပါဘဲ။
ဒီလို ဘဲ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်ကြား နဲ့ ဗဟုသုတ တိုးရပါတယ်။
အစ်မရေ – ပြာကြီး က ဘာလို့များပြန်လာခဲ့ပါလိမ့်နော်။
ကြည့်ရတာ သံယောဇဉ် ကလဲ မပြတ်ဘူးထင်ပါရဲ့။
စိတ်ထဲမှာတော့ မထားပါနဲ့တော့ အစ်မအေးရေ။
ပြီးခဲ့တာတွေ တစ်ချို့ဆိုတာ ပြန်ပြင်လို့မှမရတာနော်။
အဲဒီကနေ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ရင်ကို အမြတ်ပါဘဲ။
အစ်မ Post လေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
တိရစ္ဆာန်မှာလည်း လူကို ငြိုးတတ်တယ်ဆိုတာ ဆင်တွေ၊မြွေတွေမှာတော့ ဖတ်ဖူးတယ်၊
မေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
သံယောဇဉ်ကြီးတတ်တဲ့သူတွေ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ မမွေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။
သဂျီးပြောတော့ တိရိစ္ဆာန်မှာ ခံစားသိစိတ်မှ မရှိဘူးဆို…..။ သူ့ရွာမှာနေပြီး သဂျီးကို ပုန်ကန်တာလား။ သားသားကြောက်ကြောက်ပါ..။
အေးဗျာ..aye.kk ရေးတဲ့စာစုလေးဖတ်ရတော့..ကျွန်တော်လဲ..မေ့မရသေးတဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်အဖြစ်လေးသွားသတိရမိတယ်…အမရပူရမှာ…ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က..အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ဆိတ်အကောင်၃၀ကျော်လောက်ကိုနေ့တိုင်းထွက်ကျောင်းရတယ်…ဆတ်ဆိုတဲ့သတ္တ၀ါကလဲ..
တယ်..ဒါနဲ့ ဘယ်နားမှန်သွားပါလိမ့် ဆိုသွားကြည့်တော့…အား…ကျုပ်တော်တော်လန့်သွာတယ်..
ကိုယ်ပြုခဲ့မိသော မကောင်းမှုအပြစ်ကို မေ့ပျောက်ရာ၏..
ပြုခဲ့ဖူးသော ကောင်းမှုတရားတို့ကိုကားအဖန်တလဲလဲ ဆင်ခြင်ရာ၏.
သဂျီးကတော့ ကိုယ့်ကိုထိခိုက်လာမဲ့အရေးဆိုရင်သတ္တ၀ါချင်းပေမဲ့ရှင်းသင့်တာ အကုန်ရှင်းပြစ်ရမယ်လို့ မန့်သဗျ..
အဓိကတော့ တနုံနုံ ဖြစ်နေရင်မကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲ…
ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ။ ပြန်ဖတ်တိုင်း ၀မ်းနည်းနေရမယ့် ပို့စ်လေးပါပဲ … ။
တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာ ဘယ်လောက် ယဉ်ပါးပါး .. လူလောက်တော့ အသိဥာဏ်မဖွံ့ဖြိုးပါဘူး .. ဒါကို ကျွန်မလည်း အချိန်အတော်ကြာထိ မေ့နေခဲ့ဖူးတယ် … ။ အိမ်မှာကြောင်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ်… မနက်ပိုင်းဆို လာလာနှိုးတယ် … အရင်ကတော့ တဆာဆာ အော်ပြီး နှိုးတာ.. အခုနောက်ပိုင်း အော်လည်းနှိုးတယ် လူကို ကုတ်ပြီးလည်း နှိုးတယ် … ကုတ်တာ တခြားနေရာမဟုတ်ဘူး .. မျက်နှာကိုပါ … ။ သူက လက်ကလေးနဲ့ ပုတ်ပေမယ့် လက်သည်းကြောင့် အစင်းရာတွေ ထင်နေရင် အရမ်းကြည့်ရစိုးပါတယ် … ။ တစ်ရက်ကျတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်လည်း မသိဘူး … သူ့နှာခေါင်း စိုစိစိနဲ့ မျက်နှာကို လာထိပွတ်ပြီး နှိုးတယ် … ။ ကြောင်နှပ်ချီးမပြောနဲ့ .. လူနှပ်ချီးတောင် ရွံတာ .. စိတ်တိုပြီး လက်နဲ့ ရွယ်လိုက်လို့ … ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ် .. နောက်ရက်တွေမှာလည်း လာမနှိုးတော့ပဲ စိတ်ကောက်နေတတ်တယ် … ။
တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာထိ စိတ်ကောက်တုန်းဆိုတော့ ….စိတ်ဆိုးပြေအောင် လက်နှစ်ဘက်နဲ့ မျက်နှာလေးကို စုကိုင်ပြီး ငုံနမ်းလိုက်တုန်း မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြုမူကြောင့် အတော် လန့်သွားပြီး ကြောင်ကိုလည်း တွန်းထုတ်လိုက်တာ လေးငါး မီတာ လွင့်သွားတယ် … ။ ချုပ်မထားတဲ့ လက်နဲ့ မျက်စိကို လှမ်းကုတ်လိုက်ခြင်းပါ … ။ … လုပ်ပြီးသွားမိတနှုံ့နှုံ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားတော့မှ .. ငါ သူ့ နားရွက်ကို ဖိလိုက်မိတာကိုး နာလို့ ကုတ်တာ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ် … ။
အခုတော့ တော်ရုံတန်ရုံ ခြင်တောင် ဘတ်တံနဲ့ မရိုက်ဖြစ်အောင် ထိန်းနေပါတယ် … သတ္တ၀ါတွေလည်း … သူတို့အသက်ကို သူတို့ တွယ်တာတတ်ကြတာကြောင့်ပါ ။
အမအေးအဖြစ်အပျက်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ .. ကျွန်မတို့အိမ်မှာ မွတ်တားလို့ခေါ်တဲ့ ခွေးထီးကြီးရယ် အိမလို့ခေါ်တဲ့ တယ်ရီယာခွေးမလေးရယ်ရှိခဲ့ဖူးတယ် … မွတ်တားကြီးက အရင်မွေးထားတာ .. အိမရောက်လာတော့ အိမကို ပိုချစ်တာကို ဒီကောင်က မျက်မုန်းကျိုးနေတာ .. သခင်တွေကို မျက်စောင်းထိုးတယ် … စိတ်နာတဲ့အပြုအမူလဲပြုမူတယ် … အိမက ကလေးတွေမွေးပြီး ကလေးတွေကိုပါ ချစ်တော့ သူအရမ်းစိတ်ဆိုးပြီး အိမ်ပြန်မလာတော့ဘူး … ဘယ်လိုမှ ခေါ်လို့မရတော့တာ .. စည်ပင်က အမဲသားပစ်မယ်သတင်းပေးလို့ သူ့ကိုလိုက်ရှာပြီး အိမ်ထဲအတင်းထည့်တာကို အထည့်မခံပဲ အတင်းရုန်းကန်ပြီး ပြန်ထွက်ပြေးတယ် … အဲဒီညမှာ အဆိပ်မိသွားပြီး အိမ်ရှေ့အထိ မရောက်ရောက်အောင်ပြန်လာပြီးမှ တစ်အိမ်သားလုံးမျက်စိရှေ့မှာ သေသွားလို့ ကျွန်မတို့လဲ တော်တော်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ် …
ခွေးမှာလဲ စိတ်ခံစားချက်ရှိတာ လက်တွေ့ပါ ….